Gumiguru 19, 2020
Kupinda kwameya weKariba muchirongwa chekupihwa kwevanhu vanoshaya zvekudya nesangano reWorld Food Program-WFP kwave kukonzeresa mutauro wakanyanya munyika.
Vamwe vagari vemuKariba vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupihwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo VaGeorge Masendu.
Sachigaro weKariba Residents Association VaSam Mawawo vanoti muKariba mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi.
Asi VaMasendu vanoti havasi ivo vakapinda muchirongwa ichi asi kuti mudzimai wavo wechipiri ndiye akanyoresa zita ravo vakapinda sasaimba.
Vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti vapihwe zvekudya nemasangano anobatsira sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviuru zviviri chete sameya weguta.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance VaClifford Hlatywayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura webato reZanu PF ari kuyamurwawo. Kanzura weZanu PF munzvimbo iyi VaRodric Mugwanhira varamba kuti vari muchirongwa cheWFP.
Mumwe mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muWFP VaTatenda Macheka vanoti WFP iri kuongorora nyaya dzose idzi. Vati kana paine vakaita chikiribidi vanoendeswa kumapazi ehurumende akakodzera kubata nyaya iyi asi kana vachikodzera vanongopihwawo chikafu sevamwe vari kuchida.
Mumwe mushandi wesangano rinoshanda neWFP reLinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged-LEAD- asina kuda kudomwa nezita anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura zvakanyanya kana kuti maHot Spots.
Mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapihwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda.
Sangano reWFP rinoti huwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2,2 million.